दोस्रो विश्व युद्ध लडेका नरनाथ घिमिरेको संस्मरण « गोर्खा आवाज
नरनाथ घिमिरे हाल ९२ वर्ष पुरा भईसकेका छन् । यहि चैत्र २८ गते उनको जन्मदिन पर्न गएको छ । जीवनका लामो आरोह अबरोह उकाली ओराली पार गरिसकेका नरनाथ जीवनमा एउटै कुरा भन्ने गर्दछन् सकारात्मक सोचबाट मात्र राष्ट्र बन्न सक्दछ । उनी ज्येष्ठ नागरिक मात्र होईनन्, समाजसेवी पनि हुन् । हालसम्म सकेसम्म समाजमा केहि न केहि रुपमा योगदान दिन पछि परेका छैनन् । पूर्वी नेपाल भोजपुर जिल्लामा जन्मेका उनी चरम गरिबीका कारण बाल्यकालमा विदेशिन पुगेका थिए, भारतमा जहाँ उनी दार्जिलिंगको गुममा भर्ति हुन पुगे र क्रमिक रुपमा करिब ३२ वर्ष भन्दा बढी भारतीय सैनिकमा सेवा गर्न पुगे । उनी संग नेपाल र भारतको सर्घषको लामो ईतिहास छ । भारतीय सैनिकमा सिपाही हुदै क्याप्टेन पदमा सेवा गर्दै जाँदा भारतका तात्कालिन नेता महात्मा गान्धी, जवहरलाल नेहरु र ईन्दिरा गान्धीसंग उनको संयोगवश जम्काभेट हुनपुग्यो, कर्तव्यको सिलसिलामा । परिचित हुन पुगे उनी ती नेताहरुसंग कर्तव्यकै सिलसिलामा । उनि आफ्ना समयका नेता हुन र हामी सबैको भबिस्यको मार्गदर्शक पनि हुन ।
नरनाथ घिमिरेको संस्मरण उनकै मुखारविन्दबाट…
एक भनाई छ, बर्मामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै । आराकानको ‘नेफ’ नदीमा मानिसहरु बालुवा छानेर सुन खोजिरहेको देखिन्थे । बर्मेली मानिसहरुको मुख्य पेशा नै सुन संकलन गर्ने रहेको थियो भने सोझा नेपालीहरु ब्रिटिशका गुलाम बनेर उनीहरुका लागि युद्धमा होमिएका थिए ।
म चरम गरिबीका कारण वाल्यकालमै विदेशिन पुगे । त्यो बेला नेपालमा राणा प्रधानमंत्री श्री ३ जुद्ध शमशेरको शासन थियो । आमजनतालाई देशको शासन व्यवस्था बारे कुनै चासो थिएन । किनकी उनीहरुको शिक्षा र अवशरमा कुनै पहुंच थिएन । उनीहरुले आफ्नो हाड घोटेरै खानु पर्दथ्यो । त्यस माथि म एक गाउँको एक गरिब ठिटो । घरमा चुलो बल्न गाह्रो पर्यो, मेरो आँखा रसाएर आए । देश ९० सालको भुकम्पबाट थलिएको थियो । म मात्र १३ वर्षको थिए । एकदिन कसैलाई नसोधी म घरबाट हिडें । त्यो बेला सबैका लागि विदेश भनेको भारत थियो । भोजपुर दिङ्गला पायखा घरबाट निस्केर उकाली ओराली गर्दै धरान झरियो, म युवाहरुको जत्थामा मिसिएको थिए । त्यसताका धरान जंगलामुलुक थियो । धरानबाट लेटांगको बाटो हुदै सिलिगुढी पुगियो र म दार्जिलिङ गुममा भर्ति हुन पुगे, ब्वाईको रुपमा । उमेर नपुगेकोले गर्दा ब्रिटिश अफसरले मलाई भर्ति गर्न मानेन । एक जना ब्रिटिश अफसरले मलाई नजदिक आएर भने “बाबु तिमी घर फर्केर जाउ । तिम्रो ओंठ कलिलो छ, जवान भए पछि आउनु ।” त्यतिकैमा अर्को अफसरले भन्यो “हेर यहाँ त लडाई लड्नु पर्दछ, अहिले दोश्रो विश्वयुद्ध चलिरहेछ । भर्ति हुने बितिकै खटिनुपर्दछ, बर्माको लडाईमा । बर्माको जंगलमा बसेर जापानीसंग लड्नु पर्दछ । लासमाथि सुत्नु पर्दछ । बन्दुक छढी जस्तै चलाउनु पर्दछ ।” म निर्धक्क संग सक्छु भने । छक्क परेर अलि पर उभिएको ब्रिटिश मेजर ब्रुटले मलाई सोधे “के तिमी यो चामलको बोरा उठाएर दौडिन्दै पर पोलसम्म पुगेर आउन सक्छौ ?” मईले फेरि सक्छु भने । चामलको बोरा उठाए, एक जना सिपाहिले बोरा काँध सम्म पुराउन सहयोग गरे । अनि त के चाहियो म छाती उठाएर दौडिन थाले र चौरको एक फन्का लगाएर स्याँ स्याँ हुदै मइले मेजर ब्रुटको खु्ट्टा नजिकै बोरा फाले । तब उनले आदेश दिए “यो फुच्चेलाई ब्वाईमा भर्ति गरेर बर्माको आराकान लानु र अस्पतालको ड्यिुटीमा खटाउनु ।” मलाई मेजर ब्रुट भगवानको अवतार झै लाग्यो ।
भीषण रुपमा दोश्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको मलाई पत्तो भएन । थुप्रै भर्ति भएका नेपाली सिपाहीहरुसंगै मलाई पनि थ्रिटन गाडिमा हालेर बर्माको आराकन जंगल लगियो । जहाँ घना जंगलको बिचमा आर्मिका क्याम्पहरु थिए, सानो अस्पताल रहेछ जहाँ मेरो ड्यिुटी थियो । म डाक्टरको पछि पछि दौडिन्थे दबाई पानीको झोला बोकेर । आकासमा फाईटर उडेको देखिन्थ्यो, बमवर्षक विमान जुधेको देखिन्थ्यो । मानिसहरुको जंगलमा लासहरु लडिरहेको देखिन्थ्यो । लाग्दछ जिउदो र अर्धमृत मानिसको संघारमा म उभिएको थिए, देवदुत बनेर उनीहरुको जीवन रक्षान्तका लागि । अक्सर लडाकुहरु नेपाली देख्दा मलाई एक मनले खिन्न लाग्दथ्यो तर अर्को मनले चैनको सांस फेर्दथे । आकाशबाट जापानी फौजबाट हमला नहोस भन्नका लागि आर्मि क्याम्प घना जंगलबाट छोपिएको थियो ।
एक भनाई छ, बर्मामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै । आराकानको ‘नेफ’नदीमा मानिसहरु बालुवा छानेर सुन खोजिरहेको देखिन्थे । बर्मेली मानिसहरुको मुख्य पेशा नै सुन संकलन गर्ने रहेको थियो भने सोझा नेपालीहरु ब्रिटिशका गुलाम बनेर उनीहरुका लागि युद्धमा होमिएका थिए ।
सन् १९४१ देखि शुरु भएको जापानी संगको लडाईलाई दोश्रो विश्वयुद्ध भनिन्छ । त्यसमा ब्रिटिश, अमेरिका, फ्रान्स, चाईना, अस्ट्रेलिया लगायत युरोपियन देशका आर्मिहरु जापानविरुद्ध बर्मामा लडिरहेका थिए । जापानी सेना बढिनै एग्रेसिभ देखिन्थे । उनीहरु ससाना बच्चा देखि वृद्ध वृद्धासम्म कसैलाई बाँकी राखेनन् । लडाईमा जापान एकातिर थियो भने सारा विकसित देशहरु एक ढिक्का भई जापानको विरुद्ध बर्मामा लडिरहेको देखे मैले । म अचम्मित भए । संसार एकातिर भए पनि जापानले सन् १९४१ देखि कसरी एक्लै खुलारुपले विश्वसंग लड्न सकेको होला ? कति शक्तिशाली रहेछ जापान † के कारणले जापान यस्तो शक्तिशाली हुन सकेको होला ?
जापान पुर्वबाट उग्ररुपमा बढेर आयो । बर्माको सबै भन्दा ठुलो नदी–ऐरावती नदी । ऐरावती नदीमा झुलुंगे पुल थियो । जापानी सेना बर्मामा ऐरावती नदीतर्फ जब उग्र बढेर आयो, मेरो सातोपुत्लो उड्यो । अब हामी सबै एकै चिहान हुनेछौ जस्तो लाग्यो । थाहै नपाई ब्रिटिशले एरावती नदीको पुल विस्फोट गरायो । ऐरावती नदीको वरिपरी थुप्रै बर्मिज नेपालीहरुको वस्ती थियो । उनीहरु जापानी सेनाको संगिनीबाट घोचिएर वा गोली खाएर मर्नु भन्दा ऐरावती नदीमा हाल फाले । कति त ऐरावती नदी पुल तर्दा तर्दै विस्फोटमा परेर मरे । पुल विस्फोट हुँदा सयौ मानिसहरुको लास नदीमा माछा मरे झै तैरिएर बग्यो । मानिसहरु रगत बगाएर दुश्मनबाट मर्नु भन्दा पानी डुबेर मर्न उचित ठानेर होला उनीहरु सुसाईड गरे । आत्मारक्षाको लागि गरिएको त्यो सुसाईड दृश्य मेरो जीवनको महत्वपुर्ण दस्तावेज हो ।
जब भारत स्वतन्त्र भयो मलाई लगायत धेरैलाई भारतीय सैनिकमा समायोजन गरियो र मेरो पोष्टिङ पनि पुरानो दिल्लीमा भयो ।
हिंसा र नाराले गुलामीलाई निम्ताउछ । शान्ती, विश्वास, अहिंसा सहितको देश प्रतिको कर्तव्यले नै सबै खाले खेलहरु जित्न सकिन्छ ।
एक दिनको कुरो हो शायद सन् १९४७ सेप्टेम्बर हुनुपर्दछ, ‘कुतुब मिनार’छेउको चौरमा विहान देखि मानिसहरुको भिंड थियो । अगष्ट १५, १९४७ मा भारतले स्वतन्त्रता पाएसंगै भारतीय शिर्षनेताहरु देशका विभिन्न स्थानहरुमा हुने कार्यक्रममा हिड्थे र भारत स्वतन्त्रताको भाषण गर्दथे । त्यस दिन महात्मा गान्धीको भाषण रे, उनले दिल्लीबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने रे । नाम सुनेको मात्र तर आज साक्षात्कार हुने भो । त्यसताका तीन व्यक्तिका नाम सडक देखि सदनसम्म सुन्ने गरिन्थ्यो – महात्मा गान्धी, जहवारलाल नेहरु र डा. राजेन्द्र प्रसाद । एक प्रकारको कौतुहल भो, जब थाहा पाए आज यी तिनै व्यक्तिहरु यहाँ आउदैछन् । घाम मध्यम भईसक्दा मानिसहरुको भिंड बाक्लिएर आयो । चउरमा धुलो उड्न शुरु गर्यो । शरद ऋतुको महिना मौसम प्रायः स्वच्छ रहन्छ । म संग घडि त थिएन तर लगभग दिउँसो २ बजेको समय हुनुपर्दछ, आकाशमा हेलिकप्टर उड्न शुरु गर्यो । मानिसहरु आकाशमा हेरेर कराउन थाले । अक्सर मानिसहरुको पहिरन धोती, कुर्ता, सुरुवालानै थियो । महिलाको संख्या एकदम कम थियो । म देखिरहेको थिए हेलिकप्टर आकाशमा फन्का लाउदै बस्ने ठाउँ खोजिरहेछ, यत्तिकैमा धुलो उडाउदै निकै पर हेलिकप्टर ल्याण्ड भो । चउरलाई चारैतिरबाट आर्मिले घेरा हालेको थियो, म तैनाथ थिए नेताजीहरुको रक्षान्तका लागि । म सैनिक पोशाकमा सुसज्जित थिए बन्दुक बोकेर तर किन आँखा आमजनता झै बढी नेताजीहरु प्रति नै केन्द्रित भईरहेको थियो । उनीहरुलाई हेर्न र उनीहरुको भाषण सुन्न । म बर्मामा छँदा एक अंग्रेज अफसर भन्थे “मलाई जीवनमा एउटै शौक छ गान्धीलाई भेट्ने, हि ईज रियली क्यारिस्म्याटिक लिडर । मईले उनीबाटै पेट्रोयटिजम्को पाठ सिक्ने अवसर पाएको हुँ ।”म संगै उभिएका थिए सरदारजी सुरजीत सिंह, हामी सबै उनकै कमाण्डमा ड्युटिमा खटिएका थियौ । हेलिकप्टर ल्याण्ड हुने बेलामा चउरमा मानिसहरुको भागम भाग शुरु भो । धुलो बेस्कन उडेर चउर कुईरिमण्डल भो ।
हेलिकप्टरबाट अन्तिममा तिनै ३ व्यक्तिहरु निस्के, शुरुमा डा. राजेन्द्र प्रसाद, त्यसपछि जहवारलाल नेहरु र अन्तिममा महात्मा गान्धी । तालीको बर्षा संगै कर्कल ध्वनीले कार्यक्रम स्थल गुन्जायमान भो । नेताहरु फूल र अबिरले पुरिए । आकाश खुल्ला थियो, घाम लागिरहेको थियो । पहिलो वक्ता डा. राजेन्द्र प्रसाद भए । उनी जीवनका हरेक क्षणमा पहिला नै हुने गर्दथे । त्यसपछिका वक्ता भए जहवारलाल नेहरु र अन्तिममा महात्मा गांन्धी । डा. राजेन्द्र प्रसाद सन् १९५० मा भारतको प्रथम राष्ट्रपति हुन सफल भए भने जहवारलाल नेहरु सन् १९४७ मा प्रधानमंत्री हुन पुगे । सन् १९५२ मा भारतको प्रथम आमनिर्वाचनमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी विजय भएपछि उनी पुनः प्रधानमंत्रीमा चुनिए । महात्मा गान्धी लौरोका सहाराले उभिए र हिन्दीमा मन्द शैलीमा भाषण गरे । उनको भाषण शान्त तलाउ झै लाग्यो मलाई । मुलुकको भौगलिक विखण्डीकरणको विषयलाई लिएर हिन्दु र मुस्लिम बिच तनाब थियो त्यसबेला, उनको भाषण त्यहि सेरोफेरोमा केन्द्रित थियो । धार्मिक साम्प्रादायिक दंगा र झडपहरु दिल्ली लगायत भारतको विभिन्न स्थानमा भएको खबर सुनिन्थ्यिो । धार्मिक सहिष्णुता अपनाई अमनचयन कायम राख्नु सरकारको प्रमुख चुनौती बन्दै गयो । उनी गान्धी वस्त्रमा थिए, आँखामा पहिरिएका थिए गान्धी चस्मा । तालु मात्र देखिने निकै बुढा र ख्याउटे देखिन्थे उनी । तै पनि लड्दा लड्दा कहिलै नथाकेको देखिने उनलाई त्यसदिनको लगभग ४ महिना पछि नाथुराम गोढ्सेले सधैका लागि विश्राम दिए, सन् १९४८ जेनवरी ३० मा । जुन दिनलाई म अक्सर कालो दिन भन्ने गर्दछु । उनी भन्ने गर्दथे अहिंसा र शान्तीनै मुलुकको शक्तिशाली तलबार हो । जयहिन्द र बन्देमातरमका नाराहरु खुब गुन्जिए कार्यक्रममा । मइले देखेको, सुनेको र अनुभुती नै भारतका नेताहरुको देशप्रतिको त्याग थियो । महात्मा गान्धीले त्यसबेला भनेका वाक्य अहिलेसम्म सम्झन्छु–“तिमीहरु आफ्नै देशका लागि केही गर र मर देशका लागि । यदि विदेशमा रहेका छौ भने तिम्रो प्रथम कर्तव्य हुनेछ देशका लागि नै केहि गर्ने । तबमात्र तिमीहरु कसैका गुलाम हुने छैनौ । हिंसा र नाराले गुलामीलाई निम्ताउछ । शान्ती, विश्वास, अहिंसा सहितको देश प्रतिको कर्तव्यले नै सबै खाले खेलहरु जित्न सकिन्छ ।”
एक पटक सरदार बल्लभभाई पटेलले भनेका थिए, “कुनै पनि व्यक्ति देशको नागरिक तब हुन्छ जब उसले देशका लागि सेवा गर्दछ ।”यो वाक्य सुनेर मलाई लाज लाग्यो म एक नेपाली युवा भएर विदेशी सैनिक भएर आएको छु, विदेशका लागि सेवा गरेको छु । विदेशका लागि नै आफ्नो रगत, पसिना र जीवन अर्पण गर्दैछु, कस्तो देशबासी हुँ म,
सहि नेतृत्व राष्ट्रले अक्सर माग्ने गर्दछ, तर पाउन सक्दैन । तब देश अल्मलिन्छ, देशमा हजार तंन्त्र आउछ, बाद आउछ, लहर आउछ । जनता वाक्क भईसकेका हुन्छन । सपना नदेखी पनि सुख छैन । उनीहरु सपना देखाउन पनि छाढ्दैनन् ।
महात्मा गांन्धीका विश्वासपात्र थिए पण्डित जवहारलाल नेहरु । उनी सन् १९४७ देखि सन् १९६४ सम्म भारतका प्रधानमंत्री रहे । १९५५ देखि १९५७ सम्म दुईवर्ष म प्रधानमंत्री जवहारलाल नेहरुको नीजी निवासमा सुरक्षाकर्मी भएर काम गरे । मेरो ड्युटि थियो नेहरु निवासको मुख्य ढोका, जँहा म बन्दुकसाथ ड्युटीमा तैनाथ हुन्थे । म अक्सर सुन्थे नेहेरु विहान धेरै समय विताउथे शौचालयमा, जँहा उनी दिनभरका योजना बुन्थे । राती अबेरसम्म बस्थे, काम गर्थे । काम गर्ने मान्छेलाई खुब माया गर्थे । उनले एकदिन मलाई भने–तिमी छुट्टीमा घर जानु, विवाह गर्नु परिवार सहित फर्कनु । म तिम्रो परिवारलाई बस्ने निवासको व्यवस्था गर्नेछु । यसरी भारतका प्रधानमंत्री म संग खुलेर त्यो दिन बोलेको देखेर मेरो शानशौकत अझ बढेर गयो । मलाई अन्य सैनिक साथीहरुले नेहरुको विश्वासपात्र भन्ने गर्दथे । खोई कति काम गरेका होलान, थकाई पनि नलाग्दो हो, उनको लेट नाईट लाईफ अनि विहान ८ बजे कोठाबाट बाहिर निस्किनुपर्ने बाध्यता मईले नजिकदेखि महसुस गर्न पाए । जब म पाउथे उनलाई देख्थे उनी अक्सर मानिसहरुलाई केहि न केहि निर्देशन दिईरहेका हुन्थे । मलाई केही मात्रामा थाहा छ नेहरुका राम्रा गुणहरु, मइले देखेको उनको ठुलो गुण भनेको देशप्रतिको सतप्रतिशत बफादारी हो, जिम्मेबार हो । देशको इतिहाँसमा यस्ता राजनेताको भुमिका कतै न कतै हुनुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ । सहि नेतृत्व राष्ट्रले अक्सर माग्ने गर्दछ, तर पाउन सक्दैन, तब देश अल्मलिन्छ, देशमा हजार तंन्त्र आउछ, बाद आउछ, लहर आउछ । जनता वाक्क हुन्छन । सपना नदेखी पनि सुख छैन । उनीहरु सपना देखाउन पनि छाढ्दैनन् ।
मैले लडाईमा सुनको विस्कुटहरु जताततै छरिएको देखे । सैनिकहरुलाई लोभाएर सुनको विस्कुटहरु छर्थे चिनीयाँ र टिप्न जानेलाई गोली ठोक्थे ।
एकजना साथी जो कुमाउबाट थिए म संगै, म दंग भए आखिर उनी पनि त नेपाली नै हुन । नाम थियो भिमसेन विष्ट । जब उनले छाती फुकाएर म भारतिय हुँ भने, म खङरंग भए । उ आफुलाई भारतीय भएकोमा गर्व गर्दथ्यो । म गोरखाली भएको गर्व गर्थे । फरक हामी बिच भुगोलको पहिचानको थियो । सन् १९६२ मा भारत चीन बीचको लडाईमा हामी दुवै जना ‘नेफा’मा थियौ । भारत चीन सिमा क्षेत्र ‘नेफा’मा करिब १३ दिन घमासान लडाई भयो । कोही नेपाली गोरखालीको रुपमा मरे त कोही भारतीयको रुपमा । नेपालीभाषी भएपनि फरक भुगोलको पहिचान बोकेका विवस पात्र मध्ये म किन्चित नडराई लडे । किनकी म विदेशी भुमिका लागि लडे पनि आफ्नो जमिनमा मर्नुछ भन्ने कताकता भित्रबाट आँट आईरह्यो । लडाईको तेह्रौ दिन दुवै पक्षबीच घमासान फाईरिङ भईरहेको थियो, वातावरण एकदम तनावपूर्ण थियो । मैले लडाईमा सुनको विस्कुटहरु जताततै छरिएको देखे । सैनिकहरुलाई लोभाएर सुनको विस्कुटहरु छर्थे चिनियाँहरु र टिप्न जानेलाई गोली ठोक्थे । भिमसेन विष्ट युद्धमा मारियो । युद्ध सकिएपछि थाहा भो सुनको विस्कुट त पित्तल माथि हल्का सुनको जलप पो रहेछ । कसरी चिनियाँहरु सिपाईलाई उल्लु बनाउन सकेका होलान् ।
तिब्बतीहरुले सुनको बिस्कुटहरु बक्सिसको रुपमा दिन खोज्दा मइले एउटा पनि गोजीमा हालिन । सम्झन्दा अहिले अचम्म लाग्छ । अहिले त पुरै सरकार यहाँ सुनको बिस्कुटमा फनफनी घुमिरहेको छ । ईज्जतको रोटी खानुको मज्जा शायद कमैले महसुस गर्छन, त्यसले दिदोरहेछ नी बुढेसकालमा एक भिन्न खुशी र आत्मासन्तुष्टि ।
सन् १९५९ को प्रसंग हो । चीनको लगातार हस्तक्षेप पछि दलाई लामा भागेर आफ्ना चेलाहरु सहित भारतीय भुमिमा छिरे । शरणार्थीको रुपमा उनीहरुलाई सकुशल आसामको तेजपुर ल्याउने जिम्मेबारी मेरो काँधमा आयो । लस्कर तिब्बती डफ्फा घोडा खच्चरमा थिए । उनीहरु भोक र प्यासले रन्थनिएका थिए । त्रास र चिन्तामा आक्रान्त थिए । उनीहरु बोराबाट सुनका बिस्कुट निकाल्दै हामीलाई हातमा राखी भन्थे हामीलाई खानेकुरा देउ । हामी सुनको बिस्कुट चामलसंग साट्छौ, खाधन्नसंग साट्छौ । कस्तो विनिमय प्रणाली थियो त्यो मलाई अहिले पनि झलझली याद आउछ । तर बफादार सैनिकहरु कहाँ पछाडि डग्थे र ?, त्यसमाथि गोर्खाली । बाहिर निकालेका सुनका बिस्कुट पुनः बोराभित्र कोच्न लगाई हामीले टिनमा प्याक भएको ग्लुकोज बिस्कुट निकाली उनीहरुलाई हातमा थमायौ । उनीहरु बिस्कुट खान पाएर खुब रमाए । ती तिब्बती भाग्यमानी थिए जसले वास्तविक बिस्कुट चाख्न पाए । भारतीय भूमीमा पाईला नटेक्दै कतिले त ज्यानै गुमाईसकेका थिए । तिब्बतीहरुले सुनको बिस्कुट बक्सिसको रुपमा दिन खोज्दा मइले एउटा पनि गोजीमा हालिन । सम्झन्दा अहिले अचम्म लाग्छ । अहिले त पुरै सरकार यहाँ सुनको बिस्कुटमा फनफनी घुमिरहेको छ । शायद सुनको बिस्कुटमा भुलेको थिए भने म आज ९२ वर्षको उमेरसम्म कसरी बाँच्न सक्थे र ? ईज्जतको रोटी खानुको मज्जा शायद कमैले महसुस गर्छन, त्यसले दिदोरहेछ नी बुढेसकालमा एक भिन्न खुशी र आत्मासन्तुष्टि ।
छोटो कार्यक्रम भए पनि मईले ईन्दिरा गान्धीसंग उभिएर चिया पिउने अवशर पाए । चिया पिएको फोटो खिचाए जुन अहिले पनि मेरो एलबममा सुरक्षित छ ।
सन् १९८० मा असम नागाल्याण्डस्थित ‘चाम्पाङ’पोष्टको कमाण्डर भई पोष्टिङ हुँदा त्यसताकाका भारतीय प्रधानमंत्री ईन्दिरा गान्धीको नागालैण्डको ‘नगनीमारा’स्थित हेडक्वाटर र चाम्पाङ पोष्टमा भ्रमण योजना तय भो । मेरो लागि ठुलो चुनौती थपियो । यत्रो ठुलो प्रधानमंत्रीको भ्रमण सानो चाम्पाङ पोष्टमा व्यवस्थापन गर्नु चानचुने कुरो थिएन । मेरो मानसपटलमा खेलिरह्यो कसरी प्रधानमंत्रीको भ्रमण व्यवस्थापन गर्ने हो ? कतै केहि भयो भने त मेरो नाम र करियर सबै खतम हुनेछ । करिब एक महिना अगाडिदेखि नै तयारीमा जुटे । भ्रमण व्यवस्थापन सफल बनाउन योजनाहरु गुथे । कहिले त म रात भरि निदाईन । सोचिरहे कार्यप्रगती तथा समस्यालाई कसरी प्रस्तुतीकरण गर्ने, स्रोतसाधनको परिचालन कसरी गर्ने आदि । अगष्ट १६ मा जब प्रधानमंत्री ईन्दिरा गान्धी चाम्पाङ पोष्ट छिरिन, उनको पहिलो प्रश्न थियो म माथि ‘जवानलाई खानपिनको व्यवस्था के कस्तो ?’ उनी सरासर लंगर भित्र लागिन र जवानको खाना चाख्न चाहिन । मईले प्रबन्ध मिलाए, खाना चाख्दै उनी भनिन्– ए साहेब खाना अच्छा है, यिनको सप्ताहमे दोबार मिट जरुर खिलाईए ।’ मलाई लाग्यो उनी हरेक कुरामा माईक्रो लेभलसम्म पुग्थिन । छोटो कार्यक्रम भए पनि मईले ईन्दिरा गान्धीसंग उभिएर चिया पिउने अवशर पाए । चिया पिएको फोटो खिचाए जुन अहिले पनि मेरो एलबममा सुरक्षित छ । म हिजोआज त्यो फोटो हेरेर पुरानो दृश्य स्मरण गर्दछु । एक भिन्न खुशी र आत्मासन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ ।
जीवनको भोगाई र सिकाईबाट मलाई देश प्रतिको दायित्वमा प्रश्नचिन्ह खडा भईरह्यो । आत्माबोध भयो युवाको जोस र रगतपसिना आफ्नै मुलुकमा बग्न जरुरी छ । म त मजबुरीमा विदेशीएको मान्छे, अहिले त धेरै युवाहरु रहरमा विदेशिएका छन् । भारतीय सेनामा सेवा गर्नुपरेको बाध्यतामा मइले कसम खाएको थिएकि म आफ्ना छोराछोरीहरुलाई असल शिक्षादिक्षा दिनेछु, नेपालकै सेवक बनाउनेछु । सानै उमेरदेखि उनीहरुलाई भन्दैआए बरु तिमीहरु आफ्नै देशको भरिया बन । पढीगुनीकन ठुलो मान्छे बन । देशको सेवा गर असल नागरिक भएर । नभन्दै उनीहरु नेपाल सरकारको सरकारी सेवामा प्रवेश गरे र हालसम्म देशकै सेवा गरिरहेका छन् । मलाई गर्व लाग्दछ मईले गरेका तपस्या पुरा भो । यतिसम्मकी मईले नातिनातिनालाई पनि देशकै सेवा गर्नुपर्दछ भन्दैआईरहेको छु । युवा पलायन जब हुन्छ विदेशतिर त्यो देश यति नराम्रो विग्रेर जान्छ, त्यसको ज्वलन्त उदारहण म अहिले देखिरहेको छु । आफ्ना डाँडापाखा, खेतघडेरी बाँझो छाढेर दुई मुठ्ठी सांसका लागि विदेशमा आफ्नो भविष्य खोज्दै आएका सम्पूर्ण युवाहरुलाई भन्न चाहन्छु–तिमीहरु विदेशमा जान्छौ भने पनि त्यहाँ बाट प्रचुर ज्ञान, सिप र अनुभव लिएर फर्क, आफ्नै देशका लागि केहि गर । तिम्रो मृत्यु सार्थक हुनेछ ।
मलाई लाग्दछ हामी एक अद्धभुत दुनियाँमा बाँचेका छौ जो सुन्दर छ । अनि यो सुन्दर दुनियाँमा हाम्रो यात्रा कहिलै नटुंगिने चुनौतीपूर्ण छ । हामीले सधै आँखा खोल्नुछ चुनौतीका सामना गर्न र हिड्नुछ अनन्त यात्रा । समयलाई वर्ष र महिनाले मापण गर्न सकिन्दैन, हामीले वास्तवमा के ग¥यौ, के पायौ र के अनुभुती गरेका छौ सो ले समयलाई मापण गर्दछ । संसारमा सबै भन्दा सजिलो काम भनेको अरुलाई सल्लाह सुझाव दिनु हो, अर्ती उपदेश दिनु हो । आफ्नो देशमा पोखिएको योगदानले हामीलाई आत्मासन्तुष्टि पक्कै दिन्छ, बुढेस कालमा । अबको समय हामी सबैका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । विश्वको कुनै कुनाकाप्चामा गए पनि हाम्रा जीवन थप चुनौतीपूर्ण र संवेदनशिल हुनेछन । अहिले राष्ट्र थप संकटमा गुज्रेको अवस्था छ । सबैले आआफ्नो तहतप्काबाट कर्तव्य र जिम्मेवारीको बोध गरी असल नागरिकको भुमिका निभाउन ढिला गर्नु हुदैन । हामी सबैले आफ्नो मुलकुबारे सकारात्मक सोच राख्न जरुरी छ । वास्तवमा सकारात्मक सोचबाट मात्रै राष्ट्र बन्दछ ।